LG G6 bụ ezigbo ujo ma dobe ekwentị na-eguzogide ọgwụ | Gam akporosis
Ọdịda LG G5, njedebe nke hapụrụ anyị ezigbo mmetụta mgbe anyị nwere ohere ịnwale ya, ma nke ahụ enwetaghị n'ahịa ahụ, manyere onye nrụpụta ahụ ịlaghachi ma tinye telefon ndị dị na modular na-elekwasị anya n'igosi ya LG G6.
Ekwentị nke na-ejigide akụkụ nke onye bu ya ụzọ nwere igwefoto nwere ọnụ ọgụgụ abụọ dị ịtụnanya na a imewe na-eme LG G6 ekwentị mara mma ma na-eguzogide ọgwụ.
1 Nzube nke LG G6 na-enye ngwaọrụ nnukwu iguzogide mmetụta na ịda
2 Fọdụ njirimara teknụzụ na-eto ya na mpaghara ahụ
Nzube nke LG G6 na-enye ngwaọrụ nnukwu iguzogide mmetụta na ịda
Na LG G6 abụghị naanị ekwentị mara mma nwere aluminom chassis nke n’enye ya ezigbo ihe nlere. Dịka ị nwere ike ịhụ na vidiyo nke na-eduga isiokwu ahụ, otu ndị otu LG chebere maka ihe niile iji mee ka ọkwa ọhụrụ ya bụrụ ezigbo ibu na ọkwa dị elu.
Hapụ ụdị ihe eji arụ ọrụ ekwelae LG G6 na-eguzogide ọgwụ karịa ụdị ndị ọzọ. Anaghị m ekwu maka mgbochi IP 68 nke na-echebe ngwaọrụ megide ájá na mmiri. Ma ndị na-eguzogide nke ekwentị onwe ya.
80% nke ihu na-ejide ihuenyo, ekele na ndị ntakiri okpokolo agba na ekwentị nwere. Ma ọ bụrụkwanụ na ọ daa n’ala? Ọ dị mma, ọ dị ka ị nwere ike ịnọ jụụ, dịka ihe anyị hụrụ na vidiyo ahụ.
Ogwe aluminom nke gbara ya gburugburu na-edozi iko iko abụọ nke gbara ekwentị ahụ gburugburu. Na azụ nke ekwentị ahụ, anyị na-ahụ akwa oyi akwa Corning Gorilla Glass 5, Ka ọ dị ugbu a ihe dị n’ihu bụ Gorilla Glass 3. Gini mere iji jiri obere nke na-enye obere nguzogide na ihuenyo?
Ọ bụrụ na ị chọpụta, LG G6 ihuenyo nwere ntakịrị gburugburu. Sistemụ a na - eme, n’otu aka, ịdị mfe iji wee jiri aka gị ruo n’otu isi okwu, nweta ọfụma ma ọ bụrụ na anyị echebara sentimita 5.7 nke kọlụm ya echiche. N'aka nke ọzọ, akụkụ ndị a gbara gburugburu na-enye nchebe ọzọ site na ịmịkọrọ mmetụta ka mma.
N'otu ụlọ ntu LG na MWC 2017 tụpụrụ ekwentị site na ịdị elu nke ihe dịka otu mita na ọkara n’emebighị ngwaọrụ ahụ, ya mere o doro anya na LG G6 na-eguzogide ọgwụ na ọdịda.
Fọdụ njirimara teknụzụ na-eto ya na mpaghara ahụ
Eke LG Electronics
Nlereanya LG G6
Usoro njikwa Gam akporo 7.0 Nougat na LG UX6 nhazi akwa
Ihuenyo 2880 "Ngosipụta Quad HD + 1440 × 5.7 px na teknụzụ Dolby Vision HDR10
Nhazi Qualcomm Snapdragon 821 Quad Core na 2.35 Ghz
GPU Adreno 530 na 650 Mhz
Nchekwa n'ime 32dị 64 / 2Gb nwere nkwado maka MicroSd ruo XNUMXTb
Igwefoto na-aga n'ihu Igwefoto 13 Mpx Dual nwere akụkụ akụkụ 125º
Igwe n'ihu 5 Mpx nwere oke akụkụ 100º
Atụmatụ ndị ọzọ Mmiri na - eguzogide ọgwụ - onye na - agụ akara mkpịsị aka na azụ na Googe Assistant arụnyere dị ka ọkọlọtọ - A na - enweta agba Platinum Mystic White na Astral Black
Akụkụ 148.9 × 71.9 × 7.9 mm
N’amaghị anya, LG G6 abụghị naanị ekwentị mara mma ma sie ike, ọ na-egosipụtakwara ngwaike kachasị elu. Ọ bụ ezie na ọ naghị adọkpụ ọla ahụ na okpueze nke Qualcomm, ihe nhazi ya Snapdragon 821 tinyere 4 GB nke RAM nke ekwentị nwere na Adreno 530 GPU ya ha ga-ekwe ka ịkwaga ọ bụla egwuregwu ma ọ bụ ngwa n'agbanyeghị ole graphic ibu ha chọrọ.
Ghara ikwu ihuenyo ya. Anyị egosiworị gị otu Ntụle n'etiti iPhone 7 Plus na LG G6 ebe o doro anya na ihuenyo LG G6 dị mma karịa nke onye na-asọmpi ya. Ka anyị ghara ichefu igwefoto ya, otu n'ime ahịa kachasị mma na nke ahụ ga - eju gị anya site na oghere ya abụọ nke ga - enyere gị aka ijide foto dị egwu.
Obi abụọ adịghị ya na LG enweela ihe ịga nke ọma na mgbanwe a, ugbu a anyị ga-ahụ otu ọha na eze si anabata LG G6, ekwentị na ga-ada ahịa ahụ n'oge na-adịghị anya ọ bụ ezie na o nwere isi okwu megide ya: nnukwu onye iro ya, Huawei P10 adịworị ire ere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG G6, ekwentị na-eguzogide ọgwụ n'ezie
Samsung na-ekwuputa ọkwa enyemaka Bixby nke na-akwado Siri